Knowledges Zone: Notebook(Laptop) တွေ၌ window xp တင်တဲ့အခါ setup မလုပ်နိုင်သော ပြဿနာ
Notebook(Laptop) တွေ၌ window xp တင်တဲ့အခါ setup မလုပ်နိုင်သော ပြဿနာ
Notebook(laptop) အသစ်တွေမှာ hardware တွေကို operating system အတွက် window7ကိုပဲ အခြေခံထားပြီး ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် XP ကိုတင်သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာ setup မလုပ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာ တွေ့ရတက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ laptop အမျိုးအစားအားလုံးကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဥပမာ – Lenovo core2duo, HP core i3 တို့မှာ XP တင်သုံးကြည့်တာ setup လုပ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ sony မှာဆိုရင် core 2, core i3 တို့လောက်ဆို hard disk ကိုရှာမတွေ့လို့ setup မလုပ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။(မှတ်ချက်-sony core2duo အားလုံးမဟုတ်ပါ။ series မြင့်တဲ့စက်တွေသာ)
ဒါဆိုလျှင် မေးဖို့ အဖြေရှိလာပါပြီ။ ဘာကြောင့် setup မလုပ်နိုင်ရသလဲ?
ဘာကြောင့်လဲဆို ပုံမှန်မူလအားဖြင့် computer အသစ်တွေ၏ storage controller ဆိုတဲ့ SATA(Serial ATA) controller ဟာ XP ကို install လုပ်ဖို့ရန် support မလုပ်နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ XP ကို ထောင့်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက် SATA controller driver တွေကို ခွေထဲကို ထပ်ပြီးတော့ ပေါင်းပေးခြင်း ပြုလုပ်ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ SATA controller ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မေးဖို့လိုလာပါတယ်?
Serial ATA (SATA or Serial Advanced Technology Attachment) ဆိုတာကတော့ hard disk drive၊ optical drive(CD ROM) စသော storage device တွေကို ချိတ်ဆက်ပေါင်းကူးပေးဖို့ အသုံးပြုတဲ့ computer bus interface တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ computer bus interface ဟာ xp data တွေကို စီးဆင်းပေးဖို့ မထောင့်ပံ့နိုင်ခြင်းကြောင့် SATA controller မထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းလို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။
ပုံ(၂) SATA cable, and first-generation (1.5 Gbit/s) SATA ports onamotherboard
SATA ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အနည်းငယ် သိပါပြီ။ XP ကို ဘာကြောင့် install မလုပ်နိုင်ရခြင်း အကြောင်းကိုလည်း သိပြီ။ အခု ကျွန်တော်တို့ တင်မဲ့ window မူရင်း XP ခွေကို driver ထပ်ပေါင်းခြင်း ပြုလုပ်တဲ့နည်းပါ။ ဒါကို slipstream လုပ်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။
၁။ အရင်ဦးဆုံး SATA driver က ဒီကနေ Download လုပ်ပြီး winrar or 7-Zip နှင့် ဖြည်လိုက်ပါ။
၂။ Desktop ပေါ်မှာ folder အသစ်ဆောက်လိုက်ပါ။ ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်။
၃။ driver ပေါင်းထည့်တဲ့နေရာမှာ nLite software ကို အသုံးပြုမှာဖြစ်သည့်အတွက် ဒီနေရာကနေ download လုပ်လိုက်ပါ။ Run nLite, ပြီးလျှင် ‘Next’ ပေးလိုက်ပါ။
၄။ Browse ကနေပြီး မူလ XP ထည့်ထားတဲ့ drive ကို point လုပ်ပြီး directory ညွန်းပေးရပါမယ်။ ကျွန်တော်က အခွေကို စမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခွေထည့်ထားတဲ့ drive ကို ညွှန်းပါတယ်။ တကယ်လို့ စာဖတ်သူက ခွေမရှိဘူး။ iso file ဖြစ်နေတယ်ဆိုလျှင် iso file ကို right click ထောက်ပြီး mount to drive ပေးလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆို mount လုပ်လိုက်တဲ့ (drive) ကိုညွှန်းပါမယ်။
၅။ အဲလိုရွေးလိုက်တာနဲ့ empty folder တစ်ခုနဲ့ အခြားနေရာမှာ save လုပ်ဖို့ ဆိုပြီးတော့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုလျှင် အဆင့်(၂) တုန်းက ဆောက်ခဲ့တဲ့ folder ကိုသွားရွေးပေးလိုက်ပါ။
အခု ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ရွေးခဲ့တဲ့ XP disk ဟာ Service Pack ‘1’ ‘2’ ‘3’ ထဲက ဘာလဲဆိုတာကို စစ်ကြည့်ပါဦး။ အခု အသုံးပြုနေတဲ့ nLite ဟာ အနည်းဆုံး SP2ဖြစ်ရပါမည်။ တကယ်လို့ နည်းခဲ့မယ်ဆိုလျှင် အဆင့်(၇) ကိုဆက်ဖတ်သွားပါ။
၆။ Next ကိုရွေးပါ။
၇။ အခု SP0 SP1 installation disk အတွက်ပါ။ ဒီထက်မြင့်တဲ့ version ‘2’ ‘3’ ဆိုရင် (၇)အဆင့်ကို ကျော်ပြီး (၈) ကနေဆက် ဖတ်ပါ။
မူလ Micorsoft site ကနေပြီးတော့ SP2ဒီနေရာကနေDownload လုပ်လိုက်ပါ။ အခု Task Selection ကနေ Service Pack, Drivers, Bootable ISO ကိုရွေးပြီး Next ပေးပါ။
ပြီးလျှင် အစောက download ချထားခဲ့တဲ့ sp2 file ကို point လုပ်ပါမယ်။
nLite သည် file ကို extract လုပ်ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ window folder ထဲကို auto integrate လုပ်သွားပါလေ့မယ်။
အခု SP2 ကို slipstream လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ Next ကိုရွေးပြီးတော့ အဆင့်(၈) ကိုကျော်ဖတ်သွားပါ။
၈။ အခု အဆင့်ဟာ SP2 SP3 တွေအတွက်ပါ။ Task Selection ကနေ Drivers Bootable ISO ကိုရွေးပြီး Next ပေးပါမယ်။
၉။ Insert ကိုရွေးပါ။
ပြီးလျှင် Single driver ကို click လုပ်ပါ။
၁၀။ အဆင့်(၁) တုန်းက extracted လုပ်ခဲ့တဲ့ Intel SATA driver မှ iaAHCI file ကို left click နှစ်ချက်ပေးပါမယ်။
၁၁။ ဒီအဆင့်မှာ Textmode driver ကိုရွေးပါ။ ပြီးလျှင် driver တွေအားလုံးကို select လုပ်ပါ။ (CTRL+A)
၁၂။ click Next
၁၃။ Yes ကိုရွေးပါ။ ဒီအဆင့်ဟာ SATA driverများကို slipstreaming လုပ်ဆောင်တဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၄။ အဲဒါပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်းမြင်ရပါလေ့မယ်။
၁၅။ အောက်ကပုံအတိုင်းတွေ့ရရင် Integrate လုပ်ခြင်းအပိုင်းပြီးဆုံးပါပြီ။
၁၆။ ISO image လုပ်တဲအပိုင်းပါ။ အပေါ်က ပုံမှာ Next ပေးလိုက်တာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်းတွေ့ရရင် မျှားအနီလေးပြထားတဲ့အတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားလိုက်ပါ။
အခု အဲဒီ iso file ကို burn ချင်လျှင် mode မှာ burn image ကိုရွေးပြီး burn ဆိုတာနဲ့ ခွေအလွတ်တစ်ခွေထည့်ပြီး burn တာနဲ့ ပြည့်စုံသွားပါပြီ။
အောက်က section ကတော့ iso image မပြုလုပ်တော့ပဲနဲ့ တစ်ခါတည်း တိုက်ရိုက်တန်း burn ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ mode ဆိုတာ၏ အောက်မှာ direct burn ကိုရွေးပြီးတော့ burn သွားရုံပါပဲ။
၁၉။ Next and finish
thank to http://www.think.orgfree.com/
Notebook(Laptop) တွေ၌ window xp တင်တဲ့အခါ setup မလ...